Ny fitomboan'ny manahirana ny fiaramanidina amin'ny fiaramanidina ara-barotra no mitondra fiara bebe kokoa ny olona tsy miankina fiaramanidina charters. Long fomba amam-panao tsipika, Tsa fiarovana taratasim-bola, seranam-piaramanidina feno olona, ireo fotsiny ny sasany amin'ireo nanahirana ny fisidinana tamin'ny fiaramanidina ara-barotra. Ny olona izay tokony manidina kilasy voalohany, na raharaham-barotra kilasy izao miha-mijery ny toe-karena tsy miankina fiaramanidina charters. Na izany aza, Tsy toy ny amin'ny ara-barotra airlines, ny tsy mora ny mahita ny vidin'ny nanofa ny fiaramanidina. Ka dia eto isika mamaly ny fanontaniana: ohatrinona no lany ny Sata manokana fiaramanidina?
Service hafa isika Manaova
Ny vola lany amin'ny nanofa fiaramanidina iray omena ao amin'ny dolara isan'ora ny manidina. Araka ny efa nampoizina, miovaova arakaraka ny vola lany eo samihafa modely ny fiaramanidina. Misy fiaramanidina dia raitra, kosa ny hafa dia tsy hoe raitra. Misy fiaramanidina dia manana toerana ho an'ny mihoatra ny am-polony ireo mpandeha, kosa ny kely kosa no ho vitsy toy ny mpandeha efatra seza ihany.
Ny iray avy amin'ilay kely indrindra Satan'ny fiaramanidina tany an-tsena dia ny Cessna Citation Mustang, izay afaka seza momba ny 4-5 mpandeha. Izany koa no mitranga ho mora indrindra ny Satan'ny fiaramanidina: azonao atao Sata ny Cessna Citation Mustang ho eo $1700 isan'ora ny manidina.
Somary lehibe kokoa noho ny Citation Mustang no Learjet 60, izay afaka seza hatramin'ny 8 mpandeha. Atao amin'ny Bombardier mpahay siansa, in Wichita, Kansas mety lany ianao momba ny $3400 isan'ora ny fiaramanidina ny Satan'ny ny Learjet 60.
Any amin'ny farany ambony dia ny fiaramanidina tahaka ny Gulfstream 550, izay mitentina about $8600 isan'ora ny manidina fotoana. Manampy kely fa afaka seza momba ny 14-19 mpandeha.
Private Jet Charter Flight From na To Fresno, CA